Kenya oo xir-xirtay Wadaado looga shakiyey la shaqaynta Al-Shabaab – Radio Daljir
Maajo 8, 2015 6:25 b 0
Jimco May 08, 2015 (Daljir) — Ciidamada Booliska dalka Kenya aya xabsiga dhigay 16-wadaad oo kamida cullimada Muslimka ah ee dalkaasi Kenya kuwaasi ee dadka wacyi-geliya waxana laga qab-qabtay Masaajid ku yaala deegaanka Marsabir ee dalkasi Kenya.
Taliyaha ciidanka Booliska deegaanka Marsabir,Marka Wanjala oo warbaahinta la hadlay aya sheegay inay wadaada ay xir-xireen uga shakiyeen inay basaasiin u ahayeen Ururka Al-Shabaab,waxana uu tilmaamay in lagu xiray 16-kan wadaad saldhig lagu magacaabo Karare.
Sidoo kale, taliyaha ayaa sheegay in wadaaddadan Muslimiinta ah ay saddex casho ka hor soo gaareen deegaanka, ayna yihiin kuwo aan deegaanka laga aqoonin, taasna ay keentay inay shaki awgeed u xiraan.
Wadaadadan ayaa la xiray gellinkii dambe ee shalay oo Khamiis ahayd, iyadoo la sheegay inay ka kala yimaadeen Eastleigh (Islii) oo Nairobi ka tirsan, Marsabit, Sololo, Moyale iyo Isiolo.
Dhanka kale, warar ay baahiyeen warbaahinta Kenya ayaa lagu sheegaya in tuhmanayaasha muslimiinta ah ee la xiray loo wareejin doono xarunta la-dagaalanka booliiska dalka Kenya oo ku taalla magaalada Nairobi.
Xariggan ayaa kusoo beegmaya xilli booliiska dalka Kenya ay kordhinteen howlgallada ay ku beegsanayaan xubnaha uga shakiyaan inay Al-shabaab xiriirka la leeyihiin ee Kenya ku sugan tan iyo markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday Jaamacadda Gaarisa oo lagu dilay 148-qof.
Al-shabaab ayaa tan iyo markii ay Kenya ciidamada u soo dirtay Somalia ka geysanayay dalkaas weerarro uu dhiig badan ku daatay, iyagoo dhawaanna ku hanjabay inay weerarro kale ka geysan doonto Kenya.
Maamulka Gobolka Banaadir oo u Digay Hay’ado la sheegay in ay Faafinayaan Madhabka Shiicada